बेलबारी आयुर्वेद औषधालय :उपचार र औषधीको पैसा लाग्दैन, धेरैलाई थाहा छैन – Nirantarkhabar
बिनाखर्च स्वास्थ्य लाभ,औषधीको नकारात्मक असर शुन्य ,त्याग्नैपर्ने एउटा भ्रम :आयुर्वेद औषधीले ढिलोमात्रै काम गर्छ
उपचार सेवा मात्रै हैन औषधी समेत निशुल्क पाइने बेलबारी १ स्थित बेलबारी आयुर्वेद औषधालयबारे धेरै मानिसहरुलाई जानकारी नहुँदा अपेक्षा गरेअनुसार मानिसहरुले सेवा लिन सकेका छैनन् । सामान्य भन्दा सामान्य रोग विराम लाग्दा पनि उपचार गर्नुपरेपछि पैसा खर्च हुन्छ । तर सबै खालका रोगहरुको उपचार र औषधी विना पैसा पाइने यो औषधालयमा सोचे अनुसारका विरामी नआएको यहाँ कार्यरतहरु बताउँछन् ।
बेलबारी आयुर्वेद औषधालयबारे प्रचारप्रसार आवश्यक
३ वर्ष अगाडी खुलेको बेलबारी आयुर्वेद औषधालयका बारेमा खासै धेरै मानिसलाई थाहा छैन् । सबै रोग सम्बन्धी उपचार र औषधी समेत निशुल्क पाइने औषधालयमा पहिलेको तुलनामा मानिसहरु आउने क्रम केही बढेपनि अझै पनि सबैलाई थाहा नभएकाले अपेक्षा गरिए अनुसार विरामीहरु नआएको औषधालयका इन्चार्ज वरिष्ठ कविराज निरिक्षक रविन्द्रकुमार मेहता बताउछन् । ‘यहाँ सरकारले निशुल्क रुपमा उपचार पाउने गरी सेवा दिइरहेको छ । मानिस विरामी भैहालेमा सबैभन्दा पहिले यहीँ उपचार गर्न आउन भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ मेहता भन्छन् ‘ अलि प्रचार प्रसारको कमी भएको महसुस गरेका छौं । यसले गर्दा पनि धेरै मानिसलाई थाहा नभएर होला हामीले सोचे अनुसार मानिसले सेवा लिइरहेका छैनन् ।’
औषधालयमा के के सेवा पाइन्छ ?
औषधालयका प्रमुख मेहताका अनुसार बेलबारी आयुर्वेद औषधालयमा दैनिक रुपमा सबै प्रकारका विरामीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गरिन्छ । स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा त्यसको पैसा तिर्नुपर्दैन् । सबै औषधीहरु निशुल्क रुपमा पाइन्छ ।
स्तनपान गराँउदै गरेका आमा र वृद्धवृद्धाका लागि निशुल्क विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम
औषधालयले विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । स्तनपान गराउने आमाहरुका लागि स्वास्थ्य वद्र्धक र दुध उत्पादन वृद्धि गर्ने औषधी नियमित रुपमा निशुल्क वितरण हुने गरेको छ । त्यस्तै ६० वर्ष भन्दा माथीका महिला र पुरुषहरुलाई वृद्धअवस्थामा हुनसक्ने शारिरिक कमजोरी हटाउन र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधी पनि निशुल्क वितरण भैरहेको प्रमुख मेहताले जानकारी दिएका छन् ।
पञ्चकर्म अन्तर्गत पर्ने उपचार विधि ‘सर्वाङग स्वेदन’ र ‘शिरोधारा’ पनि निशुल्क
बेलबारी आयुर्वेद औषधालयमा पञ्चकर्म उपचार विधि अन्तर्गतको सर्वाङ्ग स्वेदन र शिरोधारा पनि गरिन्छ । यी सेवाहरु पनि निशुल्क रहेका छन् । सर्वाङ्ग स्वेदन वाथ रोग,छालाको रोग भएकाहरुका लागि उपयोगी विधी भएको र मस्तिष्क सम्बन्धी रोगका लागि शिरोधारा उपयोगी हुने औषधालयले बताएको छ ।
बिरामीलाई औषधी बनाउन पनि सिकाइन्छ
हाम्रै घर वरपर औषधिय गुण भएका धेरै जटिबुटी बोटविरुवाहरु छन् । औषधालयमा आउने कतिपय विरामीलाई तिनै झारपात बोटविरुवाबाट औषधी बनाएर खुवाउन पनि सकिन्छ । औषधालयले विरामीलाई त्यस्ता बोटविरुवाहरुको सदुपयोग गर्दै आफै औषधी बनाएर सेवन गर्ने उपाय पनि सिकाउने गरेको छ ।
दुहवी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि समेत उपचारका लागि औषधालयसम्म
बेलबारीकै धेरै व्यक्तिहरुलाई औषधालयबारे धेरै जानकारी नभएको भनिएपनि आयुर्वेदको महत्व तथा उपचार पद्धति बुझेका र औषधालयबारे सुनेकाहरु भने टाढाबाट पनि औषधालयसम्म आउने गरेका छन् । सुनसरीको दुहबी नगरपालिका वार्डनम्बर ११ का वडाध्यक्ष आशनारायण चौधरी पनि केही दिन अघि यो औषधालयसम्म आएका थिए । उनले ओषधालयबाट सर्वाङ्ग स्वेदन गराएका छन् । साथीमार्फत औषधालयबारे थाहा पाएर आएको उनले बताए ।
त्याग्नैपर्ने एउटा भ्रम :आयुर्वेद औषधीले ढिलोमात्रै काम गर्छ
विभिन्न उपचार पद्धतिहरु मध्ये आयुर्वेद उपचार पद्धति पनि एक हो । यो प्राचिन उपचार पद्धति हो । हाम्रै वरपर भएका जडीबुटीहरु,झारपातहरुको औषधिय गुणहरुलाई अधिकतम सदुपयोग गरेर यो उपचार पद्धति अपनाइन्छ । आयुर्वेदमा प्रयोग हुने औषधी जडीबुटी,झारपात,बोटविरुवा,फल लगायतबाट तयार हुने भएकाले यसको प्रयोगले शरिरमा नकारात्मक असर पर्दैन । आयुर्वेदिक औषधीले ढिलोमात्रै काम गर्छ भन्ने कुरा भ्रममात्रै रहेको यस क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । आयुर्वेद औषधीले बरु अन्य पद्धतिका औषधी भन्दा छिटो बाटोबाट काम गर्ने उनीहरुको दावी छ । रोग लाग्ने वित्तिकै तत्काल आयुर्वेद औषधालयमा गएर उपचार गराउँन उनीहरुको सुझाव छ ।
बिनाखर्च स्वास्थ्य लाभ,औषधीको नकारात्मक असर शुन्य
रोग लागीसकेपछि उपचार गरेर स्वास्थ्य लाभ गर्नु,त्यसमा खर्च नलाग्नु र गरेको उपचारले रोगको निदान गर्ने वाहेक शरिरमा अरु असर नपार्नु हाम्रा लागि निकै महत्वपुर्ण कुराहरु हुन् । आयुर्वेद औषधालयमा गएर यी ३ वटै कुरा पाइने बेलबारी आयुर्वेद औषधालयका इन्चार्ज वरिष्ठ कविराज निरिक्षक रविन्द्रकुमार मेहता बताउँछन् । तर धेरै मानिसलाई यस्ता कुरा थाहा नहुँदा सामान्य स्वास्थ्य समस्यामा पनि ठुलो व्ययभार व्यहोर्दै उपचारमा धाउनुपर्ने देखिएको छ । यसो गर्नुको सट्टा शरिरमा कुनै सानो समस्या देखियो भने पनि तत्काल आयुर्वेद औषधालयमा गएर विना पैसा उपचार गराएर औषधी खानु जोकोही विरामीका लागि अत्यन्त फाइदाजनक हुने मेहता बताउँछन्
विरामी हुँदा शरिरमा दुख पिडा हुने एउटा समस्या हो । उपचार गर्नुपर्दा खर्च लाग्ने अर्को समस्या हो । उपचारका लागि खाइने कतिपय औषधीले १ रोगको निदानमा काम गरेपनि अर्को खाल्को नकारात्मक समस्या पनि थपिरहेको हुन्छ । तर आयुर्वेद औषधीको प्रयोगले यस्तो नकारात्मक असर पनि नपर्ने मेहता बताउछन् ।
कहाँ छ बेलबारी आयुर्वेद औषधालय ?
बेलबारी नगरपालिका वार्डनम्बर १ स्थित विन्ध्यवासिनी राइस मिल देखि केही मिटर उत्तरमा यो औषधालय रहेको छ । विन्ध्यवासिनी मार्गको पुर्वपटि एक घरमा यो औषधालय सञ्चालनमा रहेको छ ।
बेलबारी ११ मा हरेक १५ दिनमा गाउँघर क्लिनिक
बेलबारी आयुर्वेद औषधालयकै मातहतमा रहने गरी बेलबारी ११ नम्बर वार्डमा हरेक १५ दिनमा गाउँघर क्लिनिक पनि सञ्चालन हुने गरेको छ । सो गाउँघर क्लिनिकमा पनि औषधालयबाट प्राविधिकहरु गएर निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुका साथै औषधी वितरण गर्ने गरिएको औषधालयले जनाएको छ ।
जुम्ला पुगेका डा गोविन्द केसीलाई प्रहरीद्वारा पक्राउ